Kumira Kwekuzorora Kunova Kunonetsa, Mbiri-Yakarongedzwa Nightmare mu 'Tsvaga' - iHorror
musha Horror Varaidzo Nhau Kumira kwekuzorora Kunova Kunetseka, Mbiri-Yakarongedzwa Nightmare mu 'Tsvaga'
Kumira kwekuzorora Kunova Kunetseka, Mbiri-Yakarongedzwa Nightmare mu 'Tsvaga'
Zororo Rinomira Iri Kutyisa
by Trey Hilburn III October 9, 2021 11,306 maonero
Director uye co-munyori Aaron Morgan uye waanoshanda naye-munyori Eric Vespe vanobuda vachizungunusa kutya kwese kwese dang nenzvimbo yavo ichangoburwa yemanheru, pfupi firimu inopa, Tsvaga.
Tsvaga inotevera hanzvadzi mbiri dzinokakavara dzino sarudza kumira panzvimbo yekuzorora parwendo rurefu rwemugwagwa. Kana iwe uchirangarira, chiitiko mu Trainspotting yairatidza “chimbuzi chakaipisisa muScotland,” Tsvaga iri nyore kuzvirumbidza chimbuzi chakaipisisa muUnited States. Ehezve, hazvitore nguva kuti imwe yehanzvadzi dzione kuti chimbuzi chegehena hachisi chinhu chinotyisa chakavanda munzvimbo yekumira.
Iwo mafambiro anoitwa chaizvo, uye anokwanisa kugadzira gehena rekukakavara mukati memaminitsi mashanu emumhanyi. Izvi zvakare zvine chikwereti kune imwe yakanyatsogadziriswa kurongedzwa naGreg MacLennan weMagetsi Owl Kugadzira.
Tsvaga yakanaka yakanaka inotyisa show iyo yakakwana kune mwaka wekupenga. Zano rangu nderekudzima mwenje uye kudzora vhoriyamu kusvika gumi nerimwe uye kunakirwa neichi chinhu chinotyisa chepfupi.
Nyeredzi pfupi Allisyn Snyder, Clare Grant, naSteve Agee. Iyo zvakare inoratidzira zvimwe zvechokwadi rad inoshanda mhedzisiro nemaawa maviri-nguva Academy Mubairo-musanangurwa Arjen Tuiten (uyo akashanda paPans Labyrinth uye Ghostbusters: Mushure mekufa).
Kuti uwane rumwe ruzivo nezve Tsvaga, musoro pamusoro HERE.